သီလရှင်စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သီလရှင်စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Oct 3, 2011 in Copy/Paste | 22 comments
အဲဒီလို ဘိက္ခုနီသာသနာကွယ်ပြီးနောက်ပိုင်း သာသနာနှစ် (၉၀၀)ကနေ (၁၄၀၀)အတွင်း (အေဒီသုံးရာစုကနေ အေဒီကိုးရာစု) ပျုခေတ်မှာ ပျုအမျိုးသမီးများ သီလရှင်ဝတ်လာကြပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက သီလရှင်ကိုတော့ ပရိဗိုဇ်မယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ ပုဂံခေတ်၊ အင်းဝခေတ်အထိ သီလရှင်များ အဆက်ဆက်ထွန်းကားလာပြီး ကုန်းဘောင်ခေတ်ထိ ရောက်လာပါတယ်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် မယ်ခေမာအမည်ရှိတဲ့ သီလရှင်မယ်ကင်းတို့ခေတ်မှာ သီလရှင်များ ပိုမိုထင်ရှားလာပါတယ်။ အဲဒီလို ထင်ရှားလာရာကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်း သီလရှင်ဝတ်ကြသူ အမျိုးသမီးများပေါများတာကြောင့် သီလရှင်များ ယခုအချိန်ထိ ထွန်းကားနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သီလရှင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံပါ။
တစ်ခါ သီလရှင်ကို ယောက်ျားလေးများ၊ မိဘများက ရှိခိုးသင့်၊ ရှိမခိုးသင့်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင် သီလသိက္ခာပုဒ်အနည်းအများအပေါ်မူတည်ပြီး သီလနည်းသူက သီလများသူကို ရှိခိုးရပါမယ်။ ဒါနဲ့စပ်ပြီး ရှင်းလင်းသွားအောင် မြတ်ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ စကားတော်လေးပါ ပြောပြပေးပါမယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ ဝေသာလီပြည်ကနေ သာဝတ္ထိပြည်၊ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်ကို ကြွတော်မူတဲ့အခါ ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများဟာ ဒါက ငါတို့ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာအတွက်၊ ဒါက ငါတို့ကမ္မ၀ါစာဆရာအတွက်၊ ဒါက ငါတို့အတွက်ဆိုပြီး အိပ်ရာနေရာများ ဦးထားကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဦးထားတဲ့အခါ ဇေတ၀န်ကျောင်းကို နောက်မှရောက်လာတဲ့ မထေရ်များအတွက် အိပ်ရာနေရာ မရှိကြဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ လက်ယာရံ၊ ဉာဏ်ပညာမှာ ဧတဒဂ်ရထားတဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်လာတာကို အိပ်စရာနေရာမပေးဘဲ နေကြတာပါ။ ဒါနဲ့ သူတော်ကောင်း ဆိုတော့ ဘယ်သူကိုမှ ဒုက္ခမပေးဘဲ ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာ မြတ်စွာဘုရားကျိန်းစက်ရာ ဂန္ဓကုဋီကျောင်းဆောင်နားက သစ်ပင်ရင်းမှာ ထိုင်ရင်း၊ စင်္ကြန်သွားရင်းနဲ့ ညဉ့်အချိန်ကို ကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်။
မနက်မိုးလင်းတော့ ဘုရားရှင်က ကျောင်းနားရပ်နေတာ “ဘယ်သူလဲ”လို့မေးတော်မူတဲ့အခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာက “တပည့်တော် သာရိပုတ္တရာပါဘုရား”လို့ လျှောက်ပါတယ်။ ထိုအခါ ဘုရားရှင်က “ဘာ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ”လို့ မေးတော့ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ် လျှောက်ထားလိုက်ပါ တယ်။ မထေရ်စကားကိုကြားရတဲ့အခါ မြတ်ဗုဒ္ဓက “ငါဘုရားရှိစဉ်မှာတောင် ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါး ရိုသေလေးစားခြင်းမရှိကြဘူးဆိုရင်၊ ငါဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက်ပိုင်း ဘယ်လိုများ လုပ်ကြမှာလဲ”လို့ ဓမ္မသံဝေဂ ဖြစ်တော်မူပါတယ်။
ဒါနဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်များကို စည်းဝေးစေပြီး “ရဟန်းတို့ ဘယ်ရဟန်းက နေရာဦး၊ ဆွမ်းဦးထိုက်ပါသလဲ၊ ဘယ်ရဟန်းကို အရိုသေပေးသင့်ပါသလဲ”လို့ ဘုရားရှင်က မေးတော်မူပါတယ်။ အဲဒီအခါ ရဟန်းတော်များက “အရှင်ဘုရား မင်းမျိုးကလာတဲ့ ရဟန်းကို အရိုသေပေးထိုက်ပါတယ်”၊ “ပုဏ္ဏားမျိုးကလာတဲ့ရဟန်းကို အရိုအသေပေးထိုက်တယ်”၊ “သူဌေးကနေရဟန်းဖြစ်လာတဲ့ရဟန်းကို အရိုအသေပေးထိုက်တယ်” ဆိုပြီး လျှောက်ကြသလို တချို့က ပဌမဈာန်ရတဲ့ရဟန်း၊ တချို့က ဒုတိယဈာန်၊ တတိယဈာန်၊ စတုတ္ထဈာန်ရတဲ့ရဟန်းကို အရိုအသေပေးထိုက်တယ်။ တချို့ကလည်း သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာများ၊ အဘိညာဉ်ရတဲ့ ရဟန်းတော်များကို အရိုအသေပေးထိုက်တယ်ဆိုပြီး အမျိုးမျိုး လျှောက်တင်ကြ ပါတယ်။
အဲဒီလို အမျိုးမျိုးလျှောက်ကြတဲ့အခါ ဘုရားရှင်က “ရဟန်းတို့ အခုသင်တို့ပြောတဲ့မင်းမျိုး၊ သူဌေးမျိုးစတဲ့ရဟန်းများဟာ အဓိကမဟုတ်ဘူး။ အမှန်တော့ ငါဘုရားသာသနာတော်တွင်းမှာ အစဉ်အတိုင်း ကြီးသူကို ရှိခိုးခြင်း၊ ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း၊ လက်အုပ်ချီခြင်း၊ အရိုအသေပြုခြင်းစတာတွေကို ပြုလုပ်ရမယ်”လို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ်၊ အရွယ်ဂုဏ်ကြီးသူတို့ကို အစဉ်အတိုင်း ရိုသေလေးစားရှိခိုးရပါမယ်။ ဒါကြောင့် သီလဂုဏ်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို သီလသိက္ခာပုဒ်နည်းတဲ့သူက ရှိခိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိဘများက ငါးပါးသီလသာရှိပြီး၊ သီလရှင်က ရှစ်ပါး၊ ဆယ်ပါးသီလရှိတယ်ဆိုရင်တော့ မိဘက သီလရှင်ကို ရှိခိုးရပါမယ်။ တကယ်လို့ မိဘက ဆယ်ပါးသီလယူထားမယ်ဆိုရင်တော့ မိဘကို သီလရှင်က ရှိခိုးရပါမယ်။ ကျန်တဲ့ယောက်ျား၊ မိန်းမများကလည်း မိမိတို့က သီလရှင်ထက် သီလဆောက်တည်ထားတာ နည်းနေရင် ရှိခိုးရပါမယ်။ များသောအားဖြင့် သီလရှင်များဟာ ကိုးပါးသီလကို စတင်ဝတ်ကတည်းက ယူထားကြတာများတဲ့အတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်များက သူတို့ထက် သီလဆောက်တည်ထားတာနည်းနေရင် ရိုသေလေးစား ရှိခိုးရပါမယ်။ တန်းတူဖြစ်နေရင်တော့ အသက်သိက္ခာငယ်သူက ရိုသေလေးစား ရှိခိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါ။
ဒါပြင် မြတ်ဗုဒ္ဓက သူတစ်ပါးကို ရိုသေလေးစားရှိခိုးခြင်းကြောင့် မိမိမှာ အပြစ်မရပါဘူး။ မိမိရှိခိုးရိုသေလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာ သူ့မှာရှိခိုးထိုက်တဲ့ဂုဏ်တွေ မရှိရင် အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့က သူတစ်ပါးကို ရိုသေပေးတာ၊ လေးစားတာ၊ ရှိခိုးတာဟာ မိမိအတွက် မကောင်းကျိုးမခံစားရဘဲ သက်ရှည်၊ ဆင်းလှ၊ ချမ်းသာရ၊ ဗလ၊ ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ ကောင်းကျိုးများသာရလို့ သူတစ်ပါးကို ရိုသေလေးစားမှုပြုဖို့ ၀န်းမလေးသင့်ပါဘူး။ မိမိက ကိုယ့်ထက်သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရိုသေလေးစားခြင်းမပြုမိဘူးဆိုရင်သာ အဲဒီလူဟာ ဖြစ်လေရာမှာ နုံးချာတဲ့မျိုးနွယ်တွင် ပေါက်ဖွားလာရပြီး ဘ၀မှာ အမြဲတမ်းနုံခြာနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မာန်မာနဆိုတာဟာ မထားသင့်တဲ့နေရာမှာ လုံးဝမထားမိဘဲ တစ်ခါတလေ နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက်ထောင်ပြသင့်တဲ့နေရာသာ မာန်မာနကို ထားကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါဟာလည်း တကယ်လိုအပ်တဲ့အခါမှသာ ထုတ်သုံးရမဲ့ စကားပုံဖြစ်ပါတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ သွားသုံးမိရင် ဒီစကားပုံဟာလည်း မိမိကို ဒုက္ခစပါယ်ရှယ် ပေးပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဖန် သီလယူခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောပြရမယ်ဆိုရင် သီလရှင်ဆရာလေးများဟာ ကိုးပါးသီလဆောက်တည်သူများ ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် ငါးပါးသီလ၊ ရှစ်ပါးသီလ၊ ကိုးပါးသီလ ယူချင်တဲ့လူများကို သီလပေးနိုင်ပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓကလည်း အင်္ဂုတ္တရ တိကအဋ္ဌကထာမှာ “ဥပေါသထဒိဝသေ ပန ပါတောဝ ဘိက္ခုဿဝါ ဘိက္ခုနိယာဝါ ဒသသီလ လက္ခဏာညုနော ဥပါသကဿဝါ ဥပါသိကာယ၀ါ-ဥပုသ်သီလခံယူရာမှာ ရဟန်းထံဖြစ်စေ၊ ဘိက္ခုနီမထံဖြစ်စေ၊ သီလလက္ခဏာကိုသိတဲ့ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမထံဖြစ်စေ သီလဆောက်တည်နိုင်ကြောင်း မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သီလရှိသူထံမှသာ သီလယူနိုင်တာမဟုတ်ဘဲ သီလလက္ခဏာကိုသိသူ၊ သီလကိုအစဉ်မှန်မှန် အရှေ့ကတိုင်ပေးနိုင်သူ မည်သူ့ထံမှမဆို ဆောက်တည်လို့ရပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သီလကိုအစဉ်အတိုင်း မှန်မှန်ဆိုနိုင်ရင် အိမ်ရှေ့ဘုရားစင်မှာဖြစ်စေ၊ သွားရင်းလာရင်းလမ်းကြုံလို့ စေတီပုထိုးများရှေ့မှာဖြစ်စေ သီလဆောက်တည်လို့ ရပါတယ်။ သီလယူတဲ့အခါ မိမိဆောက်တည်ထားတဲ့သီလကို မကျိုးမပေါက်အောင် စောင့်ထိန်းမယ်ဆိုတဲ့ သန္ဒိဋ္ဌာန်ပြတ်သားဖို့သာ အဓိကကျပါတယ်။
ယခုလောက်ဆို ရှင်းပြရင် သီလရှင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သတ်တာကအစ သီလရှင် ဆိုင်ရာများကို အားလုံးနားလည်လောက်ပြီလို့ ထင်မြင်ပါတယ်။ အားလုံး ဗဟုသုတအသိဉာဏ်များ တိုးပွားကြပြီး မိမိတို့ပန်းတိုင်ကို လျင်မြန်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
ဂျာနယ်ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ Download လိုက်လိုက်ပါ။ http://www.shadejournal.com/2011/10/shade-journal.html
မိထွေးတော်ဂေါတမီ သီလရှင် ဝတ်ပုံကိုလဲ တင်ဆက်ပေးစေလိုပါတယ် ဘုရား
မိထွေးတော်ဂေါတမီက ဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တာပါ။ သီလရှင်မဟုတ်ပါ။ နောက်ပိုင်းကျရင် ဦးဇင်း ရေးပေးပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ အွန်လိုင်းမှာ မိထွေးတော်ဂေါတမီအကြောင်း ရေးထားတာ တော်တော်များများ တွေ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မရေးဖြစ်တာလည်း ပါပါတယ်။
မှန်လှပါ ၊ တပည့်တော် ကတော့ ဂေဇက်မှာ ပဲ
ပျော်မွေ့ နေသူ တစ်ယောက်သာမို့ ၊ အခြားဆိုက်များ မှာ မဝင်ဖြစ်တာမို့ 
တစ်ခြား ဆိုက်များမှာ ဘယ်လို ရေးထားသလဲ ဆိုတာ မသိရကြောင်းပါဘုရား
တပည့်တော်လို မသိသေးသူတွေ အတွက်ပါ
နဲနဲလေးတော့ ရှည်ခွင့်ပြုပါ ဘုရား …မသိသေးတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ
ဘိက္ခုနီ ဆိုတာ ရဟန်းမ ပါ ။ရှင်းရှင်းပြောရရင် မိန်းမ ဘုန်းကြီးပေါ့ ။
ဘိက္ခုနီ ၀တ်ဖို့ဆိုရင် ၇ဟန်းဝတ်သလိုပဲ သိမ်တက်ရပါတယ် ။ တခြား ဘိက္ခုနီ အနဲဆုံး ငါးပါးက ကမ္မ၀ါ ဖတ်ပေးရပါတယ် ။ဒါမှ ဘိက္ခုနီ ဖြစ်တာပါ။
ဒါပေမယ့် ယခုခေတ်မှာ ဘိက္ခုနီ မရှိတော့တာကြောင့် ( နားလည်အောင်ပြောရရင် ဘိက္ခုနီ မျိုးဆက်ပြတ်သွားတာကြောင့် ) ဘိက္ခုနီ ၀တ်လို့ မရနှိုင်တော့တာပါ။
ဒါကြောင့် လူဝတ်ကြောင်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး ဘုရားသာသနာမှာ နေချင်တဲ့ အမျိုးသမီးများဟာ ကိုးပါးသီလကို စောင့်တည်ပြီး သီလရှင် ၀တ်ကြတာပါ။ ဘိက္ခုနီ နဲ့ သီလရှင် မတူပါဘူး ။
ဒါ တပြည့်တော် နားလည်ထားတဲ့ သီလရှင် အကြောင်းပါ ။မှားတာရှိရင်လဲ သွန်သင်ပါ ဘုရား
နောက်ထပ်ဗဟုသုတ လေးတွေလဲ မျှော်နေလျက်ပါ
သီလ ကို မပေါက် မကျားလားဘာလားမသိပါဘူးဘုရား
အဲ့ဒါလေးပါ ခပ်စိတ်စိတ်လေး ထည့်ရေးပေးတော်မူစေလိုပါတယ်ဘုရား
သဂျီးဆိုတဲ့ ဒါယကာကြီးက သိတဲ့အတိုင်းဘဲဘုရား
ဟုတ် ဒကာ မိုက်ကယ်။ ဒကာပြောတာကို ဦးဇင်းနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတော့ ဘာကို ရေးပေးရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အများအကျိုးများမဲ့ဟာဆို ဦးဇင်းတက်နိုင်သမျှ ကြိုးစားရေးပေးပါမယ်။ ဦးဇင်းရေးတာထက် ခိုင်လုံမဲ့ အကြောင်းပြချက်၊ သက်သေရှိရင်တော့ ဘယ်သူမဆို ငြင်းနိုင်၊ အကြောင်းပြနိုင်ပါတယ်။ ဦးဇင်းလည်း တက်နိုင်သမျှတော့ ဗုဒ္ဓစာပေ၊ လောကီအတတ်ပညာများစွာကို လေ့လာသင်ယူနေ၊ သင်ယူထားပါတယ်။
သီလကို မကျိုးမပေါက် မပျောက်မကျား ဆိုတာလား ဘယ်လိုခေါ်သလည်းတော့
သီလကျိုးတာကဘယ်လို ပျောက်တာကဘယ်လို ကျားတာကဘယ်လိုဆိုတာလေး ကိုပါဘုရား
( မိမိသီလကျိုးပေါက်မဲ့ဟာကို မလုပ်ဖြစ်အောင်လို့ပါ။ ) ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဖတ်မိတော့မှ
ဒီစကားတွေက ကြားဘူးပြီး သေခြာမသိလို့ပါဘုရား
ဟိုစာအုပ်ကြီးလှန်ဒီစာအုပ်ကြီးလှန်ပြီး ဒီလို အကြောင်းကိုမသိတော့
အခြေခံကိုတောင်သေခြာမသိသေးပါလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆင်ခြင်မိလို့ပါဘုရား
ဘိက္ခုနီအကြောင်းပါ ( ဘိက္ခုနီသာသနာဟာ သီဟိုဠ်ကျွန်းတွင် အေဒီသုံးရာစုဝန်း ကျင်မှာ နောက်ဆုံးတည်ရှိခဲ့ပြီး )
ဆိုပေမဲ့ တနှစ်ကျော်လောက်ကထင်ပါတယ်ဘုရား မြန်မာအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတဦးအကြောင်းကြားလိုက်မိလို့ပါ
မြန်မာပြည်မှာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ညီလာခံလိုတခုလုပ်တုံး.. သီဟိုက မြန်မာဘိက္ခုနီတပါးကြွလာဖူးတယ်..
အဲဒါ.. မဟနကောင်းမှုနဲ့..အတင်းလူဝတ်လဲခိုင်းပြီး.. ထောင်ထဲရောက်သွားတယ် မှတ်မိတယ်..။ အဲဒီဘိက္ခုနီရဲ့အကိုက..တပ်ထဲကဖြစ်နေလို့..နောက်တော့.. ခံဝန်ချက်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပြီး ..ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိုက်တာပဲ..
ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်လား မသိဘူး ရေးတဲ့စာတပုဒ်မှာ အဲဒီသီလရှင် အင်္ဂလန်ရောက်သွားပြီး အိမ်ထောင်ကျသွားလို့ အဲလိုဆို ဘာလို့များ ဘိက္ခုနီဖြန့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရသလဲလို့ ရေးထားတာ ဖတ်ဖူးတယ်။ အဲသလိုပြောလို့ ဆန္ဒစောပြီး ဘာညာနဲ့ အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့။ အောက်အရိယာ နှစ်ဆင့်အထိ စိတ်မကုန်သေးရင် အိမ်ထောင်ပြုတတ် ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီသီလရှင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာ ရဲဝံ့မှုကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သဂျီးကို ဖိုးသူတော် ဝတ်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဘုန်းကြီးဝတ်ပါမယ်။ သဂျီးရဲ့ အဖူးအမြော် ခံချင်လို့ပါ..။
Dear အရှင်ဘုရား ဆန်နီနေမင်း,
May I know, Which one is more important ( in serial order ) ???
in “သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်၊ အရွယ်ဂုဏ်”
သီလဂုဏ် > သမာဓိဂုဏ် > ပညာဂုဏ် > အရွယ်ဂုဏ် ( or )
ပညာဂုဏ် > သမာဓိဂုဏ် > သီလဂုဏ် > အရွယ်ဂုဏ်
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား တပည့်တော်တို. မသိသေးတဲ့ ဗုဒ္ဓ သဘောတရားတွေ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို
ဆက်လက် ရေးသား ညွှန်ပြပေးပါအုံး ဘုရား..
ရိုသေစွာ လိုက်နာမှတ်သား နာယူပါမယ်ဘုရား……
တစ်ခုလောက်မေးပါရစေဘုရား တပည့်တော် တချိန်တုန်းက အလှူလုပ်ပါတယ်ဘုရား မိုးပေါ်ကျပေါ့ အဲဒါ တပည့်တော်က ဦးပဇင်းတပါးကို သွားလှူတာ အလှူမခံပါဘူးဘုရား တခြား သူကိုလှူပါလို.ပြောပါတယ်ဘုရား တပည့်တော် အဲဒီ ဦးပဇင်းအပေါ်မှာ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဘုရား.. အဲဒါ ဘယ်လိုသဘောထားများလဲ ဆိုတာ ပြောပြလို.ရနိုင်မလားဘုရား….. တပည့်တော်ရော အပြစ်ဖြစ်သွားမှာလားဘုရား.. စိတ်ညှိုညင်သွားလို.လေ…
Dear Shwe Tike Soe,
Sardu, Sardu, Sardu,
You didareally good thing (မိုးပေါ်ကျ ကထိန်).
It is really terrible for the monk, not having ကထိန် advantages.
Nowadays, There arealot of Monasteries which cannot have ကထိန်
even in Yangon, beside Main roads.
Wine/Block (1) & Wine/Block (2), beside Parami Road, South Okkalapa T/S.
Whatashameful for our so called Htae Ra Wa Da Buddhist !!!
But, I cannot guarantee the characters of those monks,
It is the last day afternoon,
We made မိုးပေါ်ကျ ကထိန် in one monastery.
I got the new, another monastery (neighboring) hasn’t had ကထိန် yet.
Then, I urgently rush into the up-stair of this Monastery,
to ask permission for မိုးပေါ်ကျ ကထိန်.
Sadly, I found out some monks calculating “chae” ( 1 or2or3digits ).
But, those characters is their part &
Asadevoted Buddhist, We have to do our part, isn’t it ?
We did it (မိုးပေါ်ကျ ကထိန်) regardless of their character.
သီလရှင်ဝတ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းသီးသန့်ရှိသေးရင် ရှင်းပြပေးပါအုံးဘုရား။
မိုးပေါ်ကျ ကထိန်းကို ကထိန်းခင်းရန် လျှောက်ထားတဲ့ ဒကာ-ဒကာမ မရှိသေးတဲ့ကျောင်းကို ခင်းလိုတဲ့အခါ အဲဒီကျောင်းသည် အမှန်တကယ် ကထိန်းခင်းမဲ့သူ မရှိသေးပါက လက်ခံရပါမယ်။ ကထိန်းခင်းရန် လျှောက်ထားသူရှိပါက ငြင်းပယ်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ မိုးပေါ်ကျကထိန်းခင်းလိုတဲ့အခါ ကထိန်းဒကာရှိမရှိကို အရင်စုံစမ်းဖို့ လိုပါတယ်။
ဒကာအနေနဲ့က စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် သူများအပြစ်ကို ကိုယ့်ဆီပါကူးယူလိုက်သလို ဖြစ်တဲ့အတွက် အနည်းငယ်သော အပြစ်ကတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက်နဲ့ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ ဘယ်သူအပြစ်လုပ်လုပ် ကိုယ်အပြစ်မလုပ်မိဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ်တို့တွင် သီလနှင့်ပညာက အပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုကြတဲ့အတွက် ဘယ်သူက သာလွန်တယ်လို့ ပြောရခက်ပါတယ်။ တချို့က သီလကြောင့် ရဟန္တာဖြစ်သလို တချို့ကျတော့လည်း ပညာအားကောင်းလို့ ရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ဦးဇင်းဆိုဒ် http://www.sanninaymin.com/ မှာ လူတော်လူကောင်း ဆောင်းပါးမှာ ရေးထားတာကို အကျယ်တ၀င့်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ သမာဓိဂုဏ်ဆိုတာကတော့ သီလ၊ ပညာတို့ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ဂုဏ်မို့ အဲဒီဂုဏ်ကလည်း သီလ၊ ပညာမရှိရင် မဖြစ်တဲ့အတွက် သုံးခုလုံးဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ရဟန္တာဖြစ်တာချင်း အတူတူဖြစ်နေတဲ့သံဃာတွေမှာ ပညာ၊ သီလ၊ သမာဓိတွေ တူညီကြတာ များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သီလဆိုတာကတော့ အရင်စပြီး သီလစောင့်ထိန်းသူကို သီလကြီးတယ်လို့ မြတ်ဗုဒ္ဓက မိန့်ခဲ့တာကြောင့် သံဃာများအတွင်းတွင် သာသနာဘောင် အရင်ရောက်တဲ့သံဃာကို နောက်မှရောက်တဲ့သံဃာက ရိုသေလေးစားရပါတယ်။
ထို့အတူ လူ့ဘောင်တွင်လည်း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတူနေမယ်ဆိုရင် အသက်ကြီးသူကို ဦးစားပေးရပါမယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီလို သုံးပါးလုံး မတူညီရင်တော့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို့တွင် နှစ်ပါးရှိသူကို တစ်ပါးရှိသူက ရိုသေပါ။ သုံးပါးပြည့်စုံကို နှစ်ပါးပြည့်စုံသူက ရိုသေလေးစားပါ။ တစ်ပါးမှမရှိတဲ့လူက တစ်ပါးပြည့်စုံသူကို ရိုသေလေးစားပါ။
ကျန်တဲ့ ဘိက္ခုနီအကြောင်းတွေကိုတော့ ဦးဇင်းတက်သိထားသမျှ လေ့လာရေးပေးတင်ပြပေးပါမယ်။ ဘိက္ခုနီသာသနာကွယ်ပြီးပေမဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနှင့်အခြားနိုင်ငံများက ပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးသူ ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်သင့်တဲ့အချက်အလက်တွေများတာကြောင့် မြန်မာပြည်မှာတော့ ဘိက္ခုနီမပေါ်လိုက်ပေမဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနှင့် ဥရောပနိုင်ငံတို့မှာ ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် ဘိက္ခုနီအမည်ခံ ၀တ်နေကြသူများ ရှိတယ်ဆိုတာတော့ ကြားသိနေရပါတယ်။
သီလရှင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၊ ၀တ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့ လောကီအိမ်မှုကိစ္စတွေ ကင်းရှင်းပြီး သီလကိုလုံခြုံစွာစောင့်ထိန်းကာ ၀ိပဿနာတရားများကို ကောင်းမွန်စွာ ပွားများနိုင်အောင်လို့ ၀တ်ကြတာပါ။
“ရဟန်းတို့ အခုသင်တို့ပြောတဲ့မင်းမျိုး၊ သူဌေးမျိုးစတဲ့ရဟန်းများဟာ အဓိကမဟုတ်ဘူး။ အမှန်တော့ ငါဘုရားသာသနာတော်တွင်းမှာ အစဉ်အတိုင်း ကြီးသူကို ရှိခိုးခြင်း၊ ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း၊ လက်အုပ်ချီခြင်း၊ အရိုအသေပြုခြင်းစတာတွေကို ပြုလုပ်ရမယ်”
ဆိုတော့ အခုကသိကြားသာသနာ မဟုတ်ဘူးလားဖျာ့ ဘုရားသာသနာ ကုန်သွားပီဖျာ့
ဆင်ဆာရုံးမတင်လိုက်လို့ …ပိတ်ခံလိုက်ရတာလား……။ ?
ဘုရားသာသနာလား သိကြားသာသနာဆိုတာကို ဦးဇင်းဆိုဒ် http://www.sanninaymin.com/ ကို အမေးအဖြေ တင်ထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့ရင် သိပါလိမ့်မယ်။
ဘွာတေး ဟဲဟဲ မှားတွားလို့ သိကြားသာသနာကုန်သွားပီ ဘီလူးသာသနာထဲကို နှစ်၁၀၀လောက်ရောက်နေပီ
သိကြားသာသနာက သာသနာနှစ်၅၀၀၀မှာ ရှေ့၂၅၀၀ ဘီလူးသာသနာက နောက်၂၅၀၀နော် ဟုတ်တယ်မုတ်လား သူကြီး
ဘာသိကြား..နို့ဆီ..သာသနာမှမရှိ.. ရဟန်းတွေရှိနေသမျှ.. ဘုရားသာသနာပဲ..။
အပေါ်မှာ ဦးဇင်းပြောတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်.. ပျင်းလို့သွားမဖတ်ချင်ရင်.. ဒီမှာကူးတင်ပေးလိုက်မယ်..။
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးကြီးလှပါပေတယ်သူကြီးရယ် ဟဲဟဲ ပျင်းလို့ဆိုတာထက် ကွန်နက်ရှင်ကစုတ်လေတော့
ဒီဆိုဒ်လေးတောင်အနိုင်နိုင်ဖွင့်ရတာ ဒါလေးပွင့်တာတောင်ကျေးဇူးတင်လှပြီ ဒါကြောင့်မို့လို့ပါ